Onyinye kachasị mma maka teknụzụ teknụzụ | Akụkọ akụrụngwa
Dị ka anyị na-ebe a nyere gị aka na ụbọchị ịzụ ahịa a na-atọ ụtọ, na ọ bụ na inepo Day bụ otu n'ime ndị ezigbo oge inye dị ka onyinye. Anyị emeela obere nchịkọta nke ihe anyị kwenyere na ha ga-enwerịrị onyinye ma ọ bụrụ na ị hụrụ onye na-ahụ maka teknụzụ n'anya ma ọ bụ naanị chọọ igosi onye òtù ọlụlụ gị otu ị hụrụ ya n'anya.
Ọ bụ ya mere Anyị na-ewetara gị ọtụtụ onyinye echiche maka ụbọchị nka na ụzụ Teknụzụ. Echefula n'ihi na ngwaahịa niile nwere akara aka anyị Bụ ngwaahịa nke anyị nyochara na mbụ ma nye anyị nsonaazụ dị egwu.
1 Iji melite site na ịrụ ọrụ ekwentị
2 Ibido na Conlọ ejikọtara ma ọ bụ Smartlọ Smart
3 Multimedia na ntụrụndụ
Iji melite site na ịrụ ọrụ ekwentị
Ntanetị ọrụ igwe amalitela ịbụ akụkụ nke ụbọchị anyị site na ngagharị a manyere, ọtụtụ n'ime unu nwere ike ọ gaghị enwe "ọrụ" n'ụlọ nke emegharịrị maka mkpa niile nke ihe dịka nke a nwere ike ịchọ. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe dịtụ ọnụ, anyị na-amalite na ODY Ikuku kiiboodu na òké mkpọ si Trust.
Tụkwasị obi ụmụ oke na keyboards maka ịrụ ọrụ ekwentị, ọ bara uru?
Maka naanị € 24,99 ị nwere ike ịnweta usoro zuru oke, maka keyboard, Anyị nwere ihe ruru iri na atọ igodo ụzọ abụọ maka Microsoft Office na njikwa mgbasa ozi. Ọzọkwa, kiiboodu na-efesakwa na-eguzogide ọgwụ mgbe oke ahụ dị jụụ. Ha abụọ ejikọtara site na otu ọdụ ụgbọ USB.
Keyboard na òké mkpọ ODY by Onyeka Onwenu BUYE
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe adịchaghị, anyị na-aga ozugbo na nke kacha mma kiiboodu na anyị gbalịrị ịdebe ebe a na weebụsaịtị anyị na ọwa anyị. Anyị na-ekwu maka nka Logitech.
O doro anya na anyị anaghị eche ihu na ngwaahịa dị ọnụ ala, ma ọ nwere ike bụrụ otu n'ime keyboards kachasị emegharịrị maka ebe ndị ọkachamara anyị ga-ahụ n'ahịa. Ugbu a ọ bụ n'ahịa maka euro 115,90 na Amazon. O doro anya na onyinye ahụ dị mma nke ọma na ogo ngwaahịa a na-ekwu maka onwe ya.
Nbanye Logitech na ọnụahịa kacha mma> BUYE
Ileba anya nwekwara ike ịbụ ezigbo ụzọ ọzọ iji lekọta anya anyị ma melite arụpụtaghị anyị, yabụ Anyị na-akwado Philips 273B9, nke bụ otu n'ime ndị ikpeazụ anyị nwara ma lekwasị anya na ngalaba a.
Ọ bụrụ na anyị ewere na ọ na-arụ ọrụ dị ka USB-C HUB, nke na-enye ụgwọ 60W na laptọọpụ na nke nwere SmartErgoBase, Ọ dị ka ezigbo ego karịa. O siri ike ịchọta ndị nlekota ndị ọzọ nwere njirimara ndị a na ọnụahịa dị oke ala nke nwere ike imeju ọrụ nke ọrụ telivishọn.
Philips 273B9 nyochaa> BUYE
Ibido na Conlọ ejikọtara ma ọ bụ Smartlọ Smart
Ọ bụ oge ọjọọ ka ịmalite na ụlọ mara mma na ngwaahịa nke dakọtara na IoT. O doro anya na nke a, nkwụsị mbụ anyị na-aga na Amazon ikwughachi ọhụrụ.
Ọ dị m ka ụzọ kachasị mma iji bido, ebe ọ bụ na Echo Dot dị ka ihe mgbakwunye na nke a. The Amazon ikwughachi na Zigbee protocol esonyere Philips Hue ọkụ na ndị ọzọ Alexa-dakọtara ngwaahịa ha nwere ike ime ka ndụ gị dịkwuo mfe dịka anyị gosiri gị na otu vidio anyị gbasara akụrụngwa ụlọ.
Ikwughachi Amazon> BUYE
Ngwaahịa Energy Sistem emere maka ụlọ mara mma na-eso anyị mgbe niile na weebụsaịtị anyị ma ọ nwere ike ịbelata na bazaar a. Idealzọ kachasị mma bụ ịnweta elekere mkpuchi, ọkà okwu na chaja smart na Alexa na tebụl anyị, nke a bụ Smart Ọkà okwu Wake Up si na Spanish ika.
ọ dị mma dị mma iji jupụta ime ụlọ n'ụzọ ziri ezi, imepụta na ihe ndị ahụ na-aga nke ọma na nnukwu ọrụ ha nwere na-eme ka ọ bụrụ ngwaahịa na-atọ ụtọ. N'ikwu eziokwu, ọ na-esiri m ike ịchọta isi ihe na-adịghị mma ebe ọ bụ na ọ naghị esiri m ike iji ya atụnyere.
Energy Sistem Smart Ọkà okwu Tetanụ> BUYE
O doro anya na IKEA ga-emekpa anyị ahụ n'oge na-adịghị anya n'ime ụlọ bazaa ejikọtara ọnụ, yana ọganiihu ọ dị ugbu a adịla mma. N'ebe a, anyị nwere ezigbo KADRILJ mara ezigbo ihe ma enweghị afọ ojuju karịa.
Nlekọta anya Maka na ọ bụrụ na ịzụta otu, ị ga - ejedebe itinye ha n'ụlọ niile, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwere ndepụta nke ngwaahịa dabara na usoro Zigbee nke IKEA nwere n'ụlọ ahịa ya na nke ahụ bụ ndị dị ọnụ ala karịa na ahịa maka uru maka ego.
KADRILJ kpuru ìsì site na IKEA> BUYE
Multimedia na ntụrụndụ
Anyị na-amalite site na ihe ịrụ ụka adịghị ya na ụda kacha mma na ngwaahịa akpaaka ụlọ nke anyị nwalere na 2020, n'eziokwu Na mkpokọta okwu, ọ dị m ka ngwaahịa teknụzụ kachasị mma gafere ebe a n'afọ gara aga, anyị na-ekwu maka Sonos Arc.
Sonos Arc gha aghaghi inwe obi ike na ya ga eti eti n'ime ogwe uda, anyị nwere egosipụta, adịchaghị nso ụda, Njikọta na smart atụmatụ. Sonos ejirila Arc gbalịa ụda ụda ọzọ, ha ga-esiri ya ike iguzo ya.
Sonos Arc> BUYE
Ugbu a, anyị na-ekwu obere banyere ekweisi, ọ bụrụ na ị doro anya na ị na-aga ọtụtụ "n'elu" nso, ihe kasị mma anyị nwalere na 2020 bụ Huawei FreeBuds Pro, na-enweghị obi abụọ.
Huawei FreeBuds Pro> BUYE
Otú ọ dị, anyị enwetawo ngwaahịa dị mma na ogo / ọnụahịa ha dị ka Xellence site X site Kygo nke nwekwara ANC na ụda dị egwu.
Ugbu a, anyị na-echigharịkwuru ngwaahịa ọzọ nke dị anyị ezigbo mma na nke na-agaghị efu n'ụlọ gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji igwe onyonyo gị nke ọma. Amazon Fire TV Cube bụ ngwaahịa mechiri nke ọma iji melite ezigbo ụlọ ọrụ mgbasa ozi n'ụlọ gị yana ọnụahịa dị oke ala.
Agbanyeghị, ịhapụ ịhapụ Amazon Fire TV Stick, ngwaahịa ọzọ na ọnụahịa a na-apụghị imeri emeri nke na-eme otu ihe ahụ, mana yana obere obere ike yana doro anya na oke mkpebi HD zuru oke.
Zụrụ ya na ọnụahịa kacha mma> BUYE
N'ikpeazụ anyị kwadoro Kobo Nia, otu n'ime ndị kacha mma eReaders na ọnụ ahịa dị oke ala nke anyị tụlere n'oge na-adịbeghị anya. Nke a dị na ndoro-ndoro nke Amazon Kindle nke anyị tụlekwarala ebe a na ihe karịrị otu oge.
Anyị nwere olile anya na ị masịrị ịzụ ahịa ịzụ ahịa anyị maka ụbọchị Valentine na echefula na Actualidad Gadget anyị na-anọ ebe a iji nyere gị aka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Onyinye kachasị mma maka Valentine teknụzụ